सिभिलको संस्थापक सेयर दोस्रो पटक लिलामीमा, कस्तो छ दोस्रो बजारमा बैंकको अवस्था ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सिभिलको संस्थापक सेयर दोस्रो पटक लिलामीमा, कस्तो छ दोस्रो बजारमा बैंकको अवस्था ?
काठमाडौ । दोस्रो बजारमा न्युन मूल्यमा कारोबार भईरहेको सिभिल बैङ्कको ठुलो मात्रामा संस्थापक सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकले ३१ लाख २१ हजार ६०० कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारणले आवेदन गर्न पाउनेगरि लिलामीमा ल्याएको छ ।
बैंकले सेयर लिलामीको लागि बिक्री प्रबनधकमा लक्ष्मी क्यपिटललाई रोजेको छ । लगानिकर्ताले क्यापिटलको नयाँबानेश्वरमा रहेकको कार्यालयबाट चैत्र २१ गतेसम्म शिलबन्दीपत्र बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।
बैंकको सेयरमा न्यूनतम १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा १०० कित्तादेखि लिलामीमा आएको अधिकतम सबै कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । शिलबन्दी बोलपत्र चैत २२ गते सिभिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा बिहान ११ बजे खोलिने बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले गत फागुन २३ गतेदेखि चैत १ गतेसम्म हकप्रदमा अवितरित सेयर लिलामी खुला गरेपनि न्यून मात्रामा मात्र संस्थापक सेयर विक्री भएको थियो । सिभिलले चैत १ सम्म ३२ लाख ४४ हजार ६०० कित्ता संस्थापक र ९ लाख ९२ हजार ८१९ कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा ल्याएको थियो ।
दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता १ सय २७ रुपैँयामा कारोबार भइरहेको बैंकले चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासमा २१ करोड ६९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर प्रतिसेयर आम्दानी रुपैयाँ कायम गरेको छ ।